Indawo ye-Morleys. I-Aiden 's Abode Treehouse - I-Airbnb
Indawo ye-Morleys. I-Aiden 's Abode Treehouse
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Philip
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Sep 30.
I-Aiden 's Abode iyisengezo sakamuva sezindlu ezakhiwe esihlahleni e-Morleys Place. Leli kamelo elithokomele ezingeni eliphezulu lesihlahla linombono omangalisayo we-Periyar River nezintaba ezimbozwe ngezitshalo zetiye eziluhlaza kanye namahlathi anezinkuni. Isendaweni engamakhilomitha angu-15 ukusuka e-Periyar Tiger sanctuary (Thekkady) endaweni ephakeme ngamamitha angu-2600 ngaphezu kolwandle, emaphethelweni omfula i-Periyar enikeza ukubukeka okumangalisayo nesimo sezulu esihle. Jabulela i-Kayaking nokudoba emfuleni wasezintabeni.
Cabanga ngendawo etshuza esibhakabhakeni, indawo ephakeme, lapho uphephile khona, lapho ubuka khona izihlahla zizulazula emoyeni. Cabanga ngendawo enokuthula, cabanga ngendawo lapho kungekho muntu ongakucasula khona, lapho kungekho muntu ongakubona khona futhi lapho kungekho muntu ongakuthola khona. Cabanga nje ufihlekile ku-verdantщliage, ubukele ngokuyimfihlo amabhotela anemibala egqamile edlule, kuyilapho uhamba nezinyoni ezinhle ze-Western ghats.
Jabulela impilo ekhululekile esitsheni seTiye ne-Spice. Hamba ngesitshalo setiye. Sebenzelana nabantu bendawo. Vakashela imboni yetiye ukuthola ukuthi itiye lenziwe kanjani nezingadi ze-Spice ukuze ufunde ngezinongo ezenza i-Kerala idume emhlabeni jikelele.